IFM: niavaka ny kaonseritra klasika | NewsMada
IFM: niavaka ny kaonseritra klasika
Par Taratra sur 16/11/2018
Notontosaina, omaly, ny andiany faha-95 amin’ny “Kaonseritra klasika amin’ny mitataovovonana”, fanaon’ny fikambanana Madagascar Mozarteum, etsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely. Niavaka tsy toy ny fahita hatramin’izay izy io, satria nanehoan’ireo mpitendry “violon” ny vokatry ny fiofanana niarahan’izy ireo tamin’i Leo Marillier, mpitendry matihanina avy any Frantsa.
Hita ho tsy mena-mitaha amin’ny hafa ireo mpanakanto malagasy, indrindra ireo notsongaina manokana, nanatontosa ity fampisehoana, omaly, ity. Nentin’izy ireo an-tsehatra ny sanganasan’ny mpamorona tsy zovina sy efa fanta-daza toa an-dry Robert Schumann sy i Joseph Haydn ary i Béla Bartok.
Tsiahivina fa naharitra roa andro io fiofanana sy fizarana traikefa nataon’i Leo Marillier io, ny 12 sy 13 novambra teo. Ankoatra ny traikefa, asehony amin’ny mpankafy mozika klasika ihany koa ny talentany, toy ity natao, omaly, ity. Mbola hitohy rahampitso, etsy amin’ny IFM hatrany, izany fampisehoana izany, saingy iarahany amin’i Mirana Randria, mpitendry piano, efa tsy ampahafantarina intsony ny mpankafy mozika klasika eto Madagasikara sy ny mpanaraka ireo fampisehoana klasika eto an-dRenivohitra.